Bit By Bit - Running nemaresiphi - 4.5.3 Yakha umkhiqizo wakho
Ukwakha umkhiqizo wakho kuyindlela ephakeme kakhulu engozini, yokuvuza. Kodwa, uma isebenza, ungazuza embukisweni we-feedback owusizo owenza ucwaningo oluhlukile.
Uma uthatha indlela yokwenza isinyathelo sakho esisodwa ngokuqhubekayo, abanye abacwaningi empeleni bakhe imikhiqizo yabo. Le mikhiqizo idonsela abasebenzisi bese isebenza njengama-platforms okuhlolwa nokunye okucwaninga. Isibonelo, iqembu labacwaningi e-University of Minnesota lenze i-MovieLens, ehlinzeka ngezincomo zamahhala ezizimele, ezingekho ngaphansi komphakathi. I-MovieLens isebenze ngokuqhubekayo kusukela ngo-1997, futhi ngalesi sikhathi abasebenzisi abangu-250,000 abhalisiwe banikeze izilinganiso ezingaphezu kwezigidi ezingu-20 zama-movie angaphezu kuka-30,000 (Harper and Konstan 2015) . I-MovieLens isetshenzisile umphakathi osebenzayo wabasebenzisi ukwenza ucwaningo oluhle kusukela ekuhloleni izinkolelo zesayensi yezenhlalakahle mayelana nokunikezwa kwezimpahla zomphakathi (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) ukubhekana izinselelo ze-algorithm ezinkambisweni (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) . Eziningi zalezi zivivinyo zazingeke zenzeke ngaphandle kokuthi abacwaningi babe nokulawula okuphelele ngomkhiqizo osebenzayo wangempela.
Ngeshwa, ukwakha umkhiqizo wakho kunzima kakhulu, futhi kufanele ucabange njengokwakha inkampani yokuqala: inengozi enkulu, umvuzo omkhulu. Uma uphumelele, le ndlela ihlinzeka okuningi kokulawulwa okuvela ekuzakheleni kwakho ukuhlola nokubambe iqhaza okuvela ekusebenzeni kwezinhlelo ezikhona. Ngaphezu kwalokho, le ndlela ingakwazi ukwenza i-feedback loop emihle lapho ucwaningi oluthe xaxa luholela kumkhiqizo ongcono oholela kubasebenzisi abaningi okuholela kubacwaningi abaningi nokunye (isibalo 4.16). Ngamanye amazwi, uma i-loop feedback impendulo ihlehliswa, ucwaningo kufanele lube lula futhi lube lula. Ngisho noma le ndlela inzima kakhulu okwamanje, ithemba lami ukuthi lizosebenza ngokwengeziwe njengoba ubuchwepheshe buyathuthuka. Kuze kube yileso sikhathi, uma umcwaningi efuna ukulawula umkhiqizo, isu eliqondile kakhulu ukusebenzisana nenkampani, isihloko engizoxoxa ngaso ngokulandelayo.
Umdwebo 4.16: Uma ungakwazi ukwakha umkhiqizo wakho ngempumelelo, ungazuza embukisweni wempendulo enhle: ucwaningo luholela kumkhiqizo ongcono, okuholela kubasebenzisi abaningi, okuholela ekucwaningeni okunye. Lezi zinhlobo zempendulo emihle zenzeke kunzima ukudala, kodwa zingenza ucwaningo olungenakwenzeka ngenye indlela. I-MovieLens isibonelo sephrojekthi yocwaningo ephumelele ekwakheni i-feedback loop emihle (Harper and Konstan 2015) .